जनावरको आनीबानी हेर्छु | Nagarik News - Nepal Republic Media
जनावरको आनीबानी हेर्छु
१० जेष्ठ २०७७ २ मिनेट पाठ
कक्षा : ८, पाठशाला नेपाल फाउन्डेशन, बागडोल
कोरोना भाइरसका कारण आज संसार लकडाउनमा छ । दिनदिनै मानिसको मृत्यू भैरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन गरिएको हो । हामी पनि विगत दुई महिनादेखि लकडाउनमै छौं । घरभित्रै बसिरहेका छौं ।
सुरूसुरूमा स्कुल बन्द हुँदा मलाई खुसी लागेको थियो । तर धेरैदिन स्कुल बन्द हुँदा नरमाइलो लाग्न थाल्यो । साथीहरूसँग भेट्न नपाउँदा, स्कुल जान नपाउँदा कस्तोकस्तो लाग्थ्यो । बाबाले कक्षा ८ को किताब ल्याइदिनुभयो । मैले ती किताब पढ्न थालेँ । त्यसबाहेक बिहान ११ बजेदेखि १ घन्टा हाम्रो कक्षा पनि चलिरहेको छ । अनलाइनमा साथीसँग भेट हुन्छ । फुर्सदमा उनीहरूसँग हल्काफुल्का च्याट हुन्छ । स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाएर राम्रो गरिदियो ।
यतिबेला म चित्र बनाउन पनि सिक्दैछु । युट्युवबाट हेरेर बनाउँछु । स्कुल खुलेको भए समय पाइन्नथ्यो । मैले आमा र आमाको साथीको कथामा चित्र बनाएर स्याबासी पाएँ । आमाको अनुहारमा खुसी देख्दा मलाई हौसला मिलेको छ । घरका भित्तामा टाँगिएका चित्र हेरेर मैले बनाइसकेँ । चित्र कोर्दा हाम्रो दिमाग तेज हुन्छ ।
यसबाहेक म दिदी र बाबासँग चेस पनि खेल्छु । चेस बौद्धिक खेल हो ।
साँझ पाँच बजेपछि छिमेकका साथीहरूसँग व्याटमिन्टन खेल्छु । यसले शरीर तन्दुरुस्त राख्न मद्धत गर्छ । बाबाले खेल्ने, पढ्ने र टिभी हेर्ने टाइमटेबुल बनाइदिनु भएको छ । उहाँको पनि घरबाटै अफिस चलिरहेकाले हामी टिभी मात्र हेरेर बस्न पाउँदैनौं । म दिनको एक घन्टा मोबाइल फोनमा खेल्छु ।
साँझमा हामी परिवारै बसेर समाचार र महाभारत हेर्छौं । कहिलेकाहिँ फिलिम पनि हेर्छौं ।
साँझमा हामी परिवारै बसेर समाचार र महाभारत हेर्छौं । कहिलेकाहिँ फिलिम पनि हेर्छौं । स्कुल चलेका बेला टिभी हेर्ने फुर्सद हुँदैन । बिदाका दिनमा भने हेर्छु । अचेल लकडाउन छ । म टिभीमा प्रायः जोग्राफी च्यानल हेर्छु । त्यसमा जनाबरको विषयमा धेरै कुरा जानकारी हुन्छ । त्यसमा मान्छेका रोमाञ्चक कामहरू पनि देखाइन्छ ।
त्यस्तै विभिन्न देशको भूगोल र अनौठा कुरा पनि देख्न पाइन्छ । त्यसमा सँसारको रहनसहन, संस्कृति, जीवनशैली, कला, जिवन र विज्ञानका कुरा हेर्न र सिक्न पाइन्छ । म पहिलापहिला आइरन म्यानका कार्टुन हेर्थें । अचेल स्टार मूभिमा चलचित्र हेर्छु । युट्युवमा चाहिँ कमेडी भिडियो मन पराउँछु ।
लकडाउन नभएको भए हामी घुम्न जान्थ्यौं होला ! अहिले घरमा बसिरहँदा भोक मात्र लाग्छ । केके खान मन लाग्छ । त्यसैले दिउँसो दिदी र म युट्युव हेरेर खानेकुरा बनाउँछौं । कहिले पानीपुरी त कहिले लालमोहन, कहिले जेरी त कहिले बिरयानी ।
यसरी बनाएर खाँदा खान नपाउने गरिबलाई सम्झन्छु । अहिले कति गाह्रो भएको होला उनीहरूलाई ? तिनलाई बाँडेर खान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर, कहाँ गएर बाँडौं ?
अन्त्यमा, कोरोनाबाट बच्न हामीले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक काममा बाहिर जाँदा मास्क लगाउनु पर्छ । म सबै साथीलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आग्रह गर्दछु ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ १०:५६ शनिबार
कोभिड–१९ संक्रमित संख्या तीव्र रुपमा बढे पनि भारत सामान्य जीवनतर्फ उन्मुख हुँदैछ। भारतले मार्च २५ देखि जारी लकडाउन (बन्दाबन्दी) खोल्ने योजना शनिबार सार्वजनिक गरेको हो।
होम क्वारेन्टिनका नाममा पन्छिन खोज्दै सरकार
समय छँदै कोरोनासंक्रमण नियन्त्रणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न चुकेको सरकार अहिले आएर थपिएका कोरोना संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिन खोजेको छ।
घर नै पाठशाला
नाच्नमा रुचि हुनेले नाच्ने, गाउनमा रुचि हुनेले गाउने, वाद्यवादनमा रुचि हुनेले बजाउने, लेख्नमा रुचि हुनेले लेख्ने, पढ्नमा रुचि हुनेले पढ्ने आदि कामहरू धेरै छन् । तर, हामी काम नै नभएजस्तो दिक्क मानेर बसिरहेका हुन्छौं ।
आँसुले भिजेको मनको धागोहरू जोडेर बुनिरहे मेरो सम्झनाको तान भत्किन्छ यहाँ गीत नगाउ सूर्यास्तछेउ आकाशगंगाभरि टाँगिने बादलको नौरंगी चित्रजसको विसन्चो छाँया तैरिएको छ हृदयको समुन्द्रम यतिखेर त्यै चित्रकारलाई सम्झिर